Benin ama Jamhuuriyadda Benin waa wadan ku yaalo galbeedka Afrika. Wadankaan waxoo xuduud la leeyahay wadamada Togo, Nayjeeriya, Burkina Faso iyo Nayjar. Wadankaan waxaa soo gumeestay faransiiska, waxoona xornimada siiyay 1975tii. Wadanka waxoo leeyahay xeeb dhuuban, waana meesha ee dadka badankooda ee degenyihiin.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Benin&oldid=184627"